Dhirowa mabhokisi akanaka uye akapusa pakuonekwa , gobvu mune zvinhu,pfeka zvinodzivirira, kusagadzikana kusagadzikana, uye humanized
Mitsetse yadzo yakatsetseka inoita kuti vanhu vataridzike uye vanowedzera kushongedza kukosha kwezvigadzirwa.
Isu tinopa akanakisa mhando, hwakanakisa, iyo yakanyatso kukwana chigadzirwa kurongedza kweakanyanya kusarudza maneja musika mumusika, kuitira kuti zvigadzirwa zvako zviwane iyo yepamusoro firimu uye hanya, saka Ouhai kurongedza chiri chako chakanyanya kunaka sarudzo, asiwo shamwari yako yepedyo.Kuguma kwehupenyu, asi mweya hauzombowira pasi, ikozvino rega Ouhai abatidza basa rako nehupenyu uye nekushandisa yako akaomesesa matanho, kukupa iwe unoshamisa super mhando kurongedza.
Kushandisa Chipo Pasiki Packaging Bhokisi Rekudya kana Chokoreti
Mashoko Bhodhi renzou(250G,300G, 350G),Pepa reunyanzvi(128G, 157G, 200G, 250G, 300G),Duplex bhodhi ine grey kumashure(250G, 300G, 350G,400G),Gira Pepa(250G, 300G, 350G, 400G),Craft bepa(100G, 120G, 150G, 200G, 250G, 300G),Corrugated bepa
Ruvara Pantone (PMS) color pamwe ne CMYK kudhinda
Kudhinda Muchina Die-yekucheka muchina, Muchina wekudhinda, lamination muchina, inopisa yekutsika muchina, UV muchina nezvimwewo
Kudhinda Maitiro Kudhinda neoffset, sirika chinovhara kudhinda, UV kudhinda
Kupedza Glossy varnishing, Glossy lamination, Matte lamination, UV, Ndarama inopisa kutsika, Sirivha inopisa kutsika, Nekusimbisa, nebefu, Kubvisa nezvimwewo
Mharidzo Yemahara yemuenzaniso wemari
Lead Nguva Mharidzo 5 ku 7 mazuva,zvigadzirwa zvakawanda 10 ku 15 mazuva
Kubhadhara Paypal,T / T.,Kadhi rechikwereti,L / C.,D / P,D / A.,Western Union
Kurongedza Isina Bhegi,Standard aivigirwa atorwa
Kutumira Gungwa,mhepo kana kuratidza
Aya ndiwo maitiro edu epamberi ekugadzira ekugadzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro iwe.
Iine dhizaini yakanaka kwazvo, kukwidziridzwa kwepamusoro-soro uye kugona kwekugadzira kwakaringana kusangana nezvinodiwa nevatengi.
Isu tinogara tichiteerera dhizaini, mbishi zvigadzirwa, uye mhando yechero chigadzirwa. Zvigadzirwa zvedu zviri 100% yakagadzirwa muGuangzhou kubva pakutanga kusvika kumagumo.
1. Guangzhou Mugadziri
2. OEM / ODM Yakagadziriswa Kudhinda & Mapakeji
3. Yako Inquiry kana Dhizaini inogara ichigamuchirwa!
4. Mutengo wacho ndewe kungoreva!
5. Tinosarudza kuvaka Yakareba-Nguva Bhizinesi Ukama newe! TAURA NESU!
Ouhai Kudhinda inogadzira inogadzira, pamwe yepamusoro yepamusoro pre-kudhinda, kudhinda, post-kudhinda michina uye maitiro.
Zvigadzirwa zvedu zvikuru mabhokisi echipo, kunyanya yakanakisa zvishongo bhokisi, chishongo bhokisi, bepa rechipo bhokisi, kadhibhodhi bhokisi, bepa bhokisi, atorwa bhokisi, chokoreti bhokisi, e mvura bhokisi,chemarata bhokisi, kurongedza bhokisi, kurongedza mapepa, bepa bhegi, Chipo bhegi,uye bhegi rekutenga,wachi bhokisi, cosmetic bhokisi, pefiyumu bhokisi, zvichingodaro. Yakakwira mhando uye yakaoma QC ndiwo musimboti wedu uye tsika nemagariro. 80% yevashandi vedu yapera 10 makore zviitiko.
Zvatinotengesa zvakanyatsodzidziswa uye zvine hunyanzvi zvakakwana kuti tipe sevhisi yedu yepamusoro. Chinangwa chedu ndechekupa mhando yepamusoro, zvinokwezva uye zvehupfumi mapakeji mhinduro.
1.Yakarongedzwa ne kraft bepa kana yakarongedzwa ne kraft bepa ine pallet;
2.Sunga pack, hombe kurongedza;
3.Yakarongedzwa nefilpping firimu;
4.Yakarongedzwa natenzi katoni;
5.Zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi;